Yemagariro Midhiya Sentiment Kuongorora: NdeMagariro Emanzwiro Anokosha Kwauri? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Dhata Sayenzi, Kuongorora kwepfungwa, Social Media, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Yemagariro Midhiya Sentiment Kuongorora: NdeMagariro Emanzwiro Anokosha Kwauri?
Kwemakore mabhizinesi akaedza akasiyana mazano ekuongorora uye kufanotaura maitiro evatengi. Tekinoroji evolutions, kusimuka kwe evanhu vezvenhau, kunyanya, yakawedzera zvakanyanya nhamba yenzira iyo munhu anogona kubata nayo kambani. Mharidzo yese iripo evanhu vezvenhau ine mukana wekusvika mamirioni avanhu uye nokudaro inogona kushanda nenzira mbiri. Nzvimbo yakanaka inogona kuwedzera mukurumbira wemusika wekambani nepo chichemo chiri nyore chinogona kudzikisa zvakanyanya. Saka, evanhu vezvenhau kwave kunetseka kukuru kune mabhizimisi. B2C kunyanya inotarisana nenyaya iyi pamwero wakafara nekuda kwekuwedzera kwenhamba yevatengi uye pamwero, kuwedzera kwehuwandu hwe data. Asi isu hatisi pano kuzongotaura matambudziko iwe unotoziva uripo. Tiri pano kuzopa mhinduro. Uye mhinduro pano yaizova Social Media Sentiment Kuongorora zvebhizimusi.
Inogona here Social Media kubatsira Bhizinesi kusvika nharaunda dzakakwirira? - Ziva Zvimwe
Chii chinonzi Sentiment Analysis?
Kuongorora kwepfungwa (kana kuchera pfungwa) ndiko kudzidza kwemanzwiro anounzwa kubva muchikamu chekunyora. Zvichienderana nekutarisa kwacho chinyorwa chinoiswa sechakanaka, chakaipa kana chisina kwachakarerekera. Izvi zvinyorwa zvinogona kusanganisira chero chinhu kubva kuemail kuenda kune tweet. Kuongorora kwepfungwa inoshandisa matauro emitauro, ma hashtag, mamiriro, zvirimo nezvimwewo kuongorora chidimbu chakapihwa uye kuona manzwiro anoburitswa. Izvi manzwiro ongororo ikozvino yawedzera nzira itsva dzakawanda idzo mabhizinesi anogona kuongorora zviitiko mumatanho akasiyana uye kuita sarudzo dzinotungamirwa nedata dzine chinangwa chekuvandudza kugutsikana kwevatengi. evanhu vezvenhau manzwiro ongororo yemabhizimusi eB2C anogona kuyera kuongororwa kwevatengi uye kubatsira kutora sarudzo dzakakodzera zvichibva pane chaiyo nguva data.
Ebooks paZvino Tech
Semuenzaniso, Expedia Canada yakaratidza kushambadzira kunoteerera pavakangoona kuwedzera kwakadzikama kwemhinduro dzisina kunaka kumumhanzi unoshandiswa mune imwe yevaterevhizheni.
evanhu vezvenhau manzwiro ongororo zvakaratidza kuti mimhanzi yairidzwa panguva yekushambadza yakange yave kutsamwisa mushure mekutaridzwa kwakawanda uye vatengi vaishandisa evanhu vezvenhau kuti vataure kushushikana kwavo.
Fungidzira kuti Expedia yakapindura sei? Panzvimbo pekukwiridzira mushambadziro sekutadza, Expedia yakagadzirisa mafungiro akashata nenzira yekudyidzana uye yekuzviziva nekuburitsa vhezheni nyowani yechiziviso iyo yaitaridza kuti violin inotadza iri kuputswa.
Read More: 6 Zvikonzero zvekufunga Uchishandisa Yechokwadi Nguva Ongororo yeBhizinesi
Nei Social Media Sentiment Analysis Yakakosha kuB2C uye B2B Makambani?
evanhu vezvenhau rave simba rekushambadzira remabhizinesi eB2C. Kugadzira yakakodzera, inobata uye ine nguva zvirimo pachayo idambudziko kune mazhinji emabhizinesi nhasi uye mukati mematambudziko ese ekugadzirisa. evanhu vezvenhau, imwe ongororo isina kunaka inogona kupeperetsa kuedza kwese kutorwa mukuparidzira rudzi rwako. Kuti vadzivise mukana uyu, mabhizimisi pasi rose akapinza mabasa akawanda evanhu vezvenhau nyanzvi dzekugadzirisa nyaya dzisati dzave njodzi kumhando yavo. evanhu vezvenhau manzwiro ongororo yeB2C neB2B mabhizinesi anotarisisa uye anoongorora iyi yakakura dataset uye anoburitsa manzwisisiro mundangariro dzemutengi. Chimwe chinhu chave chichidiwa nemabhizinesi kubva kare.
90% yeB2C vatengesi vanoshandisa evanhu vezvenhau mune yavo content marketing zvirongwa, zvichiita kuti ive inonyanya kufarirwa chikuva kutsikisa zvemukati. (Kunobva: contentmarketinginstitute)
64% yevatengesi vese vari kushandisa evanhu vezvenhau kwemaawa matanhatu kana kupfuura uye 41% kwemaawa gumi nerimwe kana kupfuura pasvondo. (Kwakabva: HubSpot)
Social Media Sentiment Analysis inogona kuvimbisa zvinotevera mabhenefiti kumabhizinesi eB2C neB2B:
1. Bata Zvichemo zveVatengi:
Achibatsirwa evanhu vezvenhau manzwiro ongororo, zvese B2C & B2B bhizinesi rinogona kubata zvichemo zvevatengi munguva chaiyo. Kana mutengi angotaura zvisina kunaka wongororo nezve brand izvo zvinyorwa zvavo zvinogona kuzivikanwa nekukurumidza uye matanho ekugadzirisa anogona kutorwa kudzora mamiriro acho. . Kukanganisa kwekutaura kwakadaro kunowedzera zvakanyanya kumabhizinesi eB2C nekuda kwehukuru hwakakura hwevatengi.
2. Dzivirira Brand Brand:
Zvinotora zviitiko gumi nezviviri zvakanaka nemuchina kuti uwane imwe kusagadziriswa kwakaipa chiitiko.
Kana mushandirapamwe wekushambadzira ukasaita sezvaitarisirwa, evanhu vezvenhau manzwiro ongororo inogona kubatsira mabhizinesi kupindura nekukurumidza uye nemazvo. Nekuongorora kwekutanga kwemhinduro dzisina kunaka, ese mabhizinesi eB2C neB2B anogona kuchengetedza chimiro chemhando yavo nemhinduro yakakodzera nguva uye zviito zvekudzivirira. Nekudaro, inobatsira mukushandiswa kwakaringana kwekutengesa kunonangana nevatengi.
3. Kuyera Kukanganisa kweMakambani Ekushambadzira:
51% yeB2C uye 49% emabhizinesi eB2B anotarisana nedambudziko rekuyera kugona kwemukati. (Kunobva: Siegemedia)
evanhu vezvenhau manzwiro ongororo inogona kubatsira mabhizinesi kuyera kushanda kwezviri mukati mavo pane akasiyana mapuratifomu. Nekuongorora mhando dzemashoko, ruzivo runogona kugadzirwa pamusoro pekukanganisa kwemukati kune vatengi. Kushanda kwe evanhu vezvenhau manzwiro ongororo haina kuganhurirwa kumashoko evatengi chete, zvinyorwa, kana tweets. Chero zvemukati zvinogadzirwa kana kugovaniswa pazviri evanhu vezvenhau inogona kuongororwa uchishandisa evanhu vezvenhau manzwiro ongororo unyanzvi.
Matambudziko anobatanidzwa mukushandisa Social Media Sentiment Analysis:
Dambudziko rekutanga ne evanhu vezvenhau manzwiro ongororo ndiwo mamiriro. Sevanhu, tinoshandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti titaure maonero edu. Zvimwe zvacho zvinosanganisira madimikira, dimikira, nzvero, uye kutsvinya. Semuenzaniso, “Chitima changu chiri kunonoka. Brilliant!” inogona kutorwa sekutaura kwakanaka nemakomputa kunyangwe isu tichinyatsonzwisisa kuti uku ndiko kushandisa kwakachena kwekunyomba. Verenga Zvimwe: 5 Nzira dzekuwana Bhizinesi IT Kurongeka
2.Kushandiswa kweNegatives uye Positives mune imwechete Mutongo:
Dzimwe nguva tinoshandisa zvese zvakaipa nezvakanaka muchirevo chimwe chete. Semuenzaniso, "Ini ndinoda zhizha asi ndinovenga mwaka wechando". Uyu mutongo unogona kusarudzwa semutongo usina kwazvakarerekera kunyangwe uchifanira kuputswa muzvikamu zviviri zvidiki uye chimwe chinofanirwa kutariswa sechakanaka uye chimwe chisina kunaka.
Kunze kweizvi, evanhu vezvenhau manzwiro ongororo inoda kuziva manzwiro evanhu akasiyana-siyana sekusuwa, kufunganya, kutya etc. Nekufamba kwenguva, kugona kwehunyanzvi hwekuongorora izvi kwakavandudzika zvakanyanya. Nekushandisa pfungwa dzemitauro, kuchera pfungwa inogona kuongorora zvirinani data uye nekuburitsa masimba ane simba ebhizinesi. Hunhu hwakasiyana hweiyi ongororo ndeyekuti hwakavakirwa pa machine learning kureva kuti inogona kudzidza nekuongorora huwandu hunoramba huchiwedzera hwe data. Kupfuuridza nguva, evanhu vezvenhau manzwiro ongororo inogona kuratidza kuve yakakosha data sosi kune ese mabhizinesi eB2C neB2B.
Unoda Solution Provider kune Yako Yakakura Dhata Zvido? Bata nesu unzwe simba re data science yakawedzera kubhizinesi rako.
Mashandisiro Ataiita Twitter Sentiment Analysis? - Nyaya Yekudzidza:
We at NewGenApps isu pachedu taurayiwa zvinobudirira manzwiro ongororo yekutepfenyura Twitter data kufanotaura mhedzisiro yeUK Parliamentary Elections. Isu takaita maitiro muApache Spark tichishandisa Cloud Platforms (Microsoft Azure uye IBM Bluemix).
Tichishandisa IBM Bluemix gore, yedu Apache Spark yekushambadzira application yakaunganidza data reTwitter ndokumhanya analytics munguva chaiyo inokomberedza kukosha kwemanzwiro emahashtag akapihwa nematoni emanzwiro (yakapihwa naWatson Tone Analyzer). Mhedzisiro yacho yakaiswa padhodhi redhiyo ine magiraidhi akasimba ayo anovandudza achienderera mberi. MaHashtag aive nehukama nemamiriro ezvinhu kana zviitiko zvataida kuongorora.
Tichishandisa Microsoft Azure gore, yedu yekushandisa mashandiro seasi pazasi:
Inoisa iyo Azure WebJob kuunganidza iyo data yeTwitter zvinoenderana nemushandisi yakatarwa mazwi akakosha.
Kutungamira data reTwitter muAzure Chiitiko Hub iyo inogona kugamuchira mamirioni ezviitiko pasekondi.
Kugadzira inouya ma tweets neAzure Stream Analytics basa iro rinochengeta iyo mbichana data muAzure Blob Kuchengetedza uye Azure SQL Database.
Iyo Stream Analytics basa inodaidza iyo Azure Machine Learning webhu webhu kuona maonero eiyo yega tweet.
Kufungidzira chaiwo-enguva metric nezve kufungidzirwa kwemanzwiro uchishandisa Simba BI.
Our Social Media Sentiment Kuongorora uye Big Data Prediction modhi inoshandiswa mune dzakawanda zviitiko kufanotaura uye kuongorora data. Mumuenzaniso wepamusoro, takashandisa data repa twitter kufanotaura nezvesarudzo dzeUK General. Nezve manzwiro epa Twitter, pakutanga, takaona kuti ndiyo yaive yakanyanya kunaka kuBato reLabour uye kushoma kune maConservatives. Nekudaro, pakatanga ongororo yedu uye mamwe matweets akawedzerwa, modhi yakaratidza maConservatives achiwana nzvimbo. .
Big Data matekinoroji akafanana Social Media Sentiment Kuongorora, Data mining, Predictive Modelling etc. yakavhura nzira nyowani dzemabhizinesi mumaindasitiri ese. Nekushandisa aya hunyanzvi hwetekinoroji, mabhizinesi anogona kuvandudza kuita kwavo sarudzo kune zvese zvazvino uye zveramangwana zviitiko.
Kana iwe uchitsvaga mhinduro dzekupa simba kambani yako ine simba uye inokwikwidza data analytics ipapo iwe uri munzira chaiyo. At NewGenApps, isu tinosangana nemabhizinesi akasiyana siyana kuti tibatsire pamazano e Big Data uye isu tichafara kubatana newe. Simply taura nesu, uye uone simba re data science muchiito.